Opera waxay tagtaa Webkit | Laga soo bilaabo Linux
Opera waxay tagtaa Webkit
Wareeg lama filaan ah wiilasha Opera Software ayaa ku dhawaaqay in biraawsarka Norwey uu joojinayo isticmaalka mishiinkiisa wax turjuma (Presto) u hiilinaya Webkit. Ujeeddooyinka? Waxaan uga tagayaa hadal ahaan (tarjumay) ereyada Sarkaalkaaga Tikniyoolajiyadda Sare:
“Mashiinka WebKit horeyba wuu u fiicnaa, hadafkeenuna waa inaan kaqeybqaadano waxa xitaa kafiican. Waa mid waafaqsan heerarka aan danaynayno, waxayna leedahay waxqabadka aan u baahanahay »
“Micno badan ayey leedahay in khubaradeennu ay la shaqeeyaan bulshooyinka il furan si loo sii horumariyo Webkit iyo Chromium, halkii aan ka horumarin lahayn mashiinka wax soo saarkeena. Opera waxay gacan ka gaysan doontaa mashruucyada WebKit iyo Chromium, horeyna waxaan u soo saarnay duubkeenna ugu horreeyay of »
Shakhsiyan, warkiisa wuxuu ii keenayaa madaxayga .. Hada, qabow iyo aniga oo aan falanqayn mawduuca badan ama waan ogahay waxa laga fikiro.
Ugu horreyntii, waxaan u maleynayaa inay tahay tallaabo muhiim ah oo la doonayo in lala kaashado mashaariicda furitaanka, oo laga yaabee maadaama aanan aqoon u lahayn arrimahan tiknoolajiyada aragtideyda ma gaarsiin wax badan sankayga, laakiin waxaan ka fiirinayaa meel tartan ah wax ku darsado Chrome / Chromium sidaas? Ka tag fiican Opera sida biraawsar oo ku biir horumarinta biraawsarka Google.
Waxaas oo dhami waxay ku yimaadeen natiijo ka dhalatay Opera ayaa gaadhay 300 milyan oo isticmaaleyaal ah sida ay sheegeen, iyaga oo tirinaya adeegsiga softiweerrada kombiyuutarada, Taleefoonnada, Telefishannada iyo kuwa kale, waxayna kasban doonaan wax badan oo dheeraad ah haddii ay u dhowaadaan Android e macruufka. Waxaana u maleynayaa inay taasi tahay sababta saxda ah ee aad u go'aansatay inaad ka mid noqoto Webkit mana aha Gecko.
Qalabka mareegaha waxaa isticmaala tiro daalacayaal ah: Safari, Chromium, Midori, Rekonq, Web (Browsarka Gnome), iyo kuwo kale, sida haddii ay noqonayso halbeeg, tanina qayb ahaan way wanaagsan tahay, badanaa loogu talagalay kuwa horumariya ee aan u baahnayn inay ka walwalaan barta ay ku fiicnaanayaan Opera, Explorer, Firefox, Chrome, laakiin dhanka kale beddelka ayaa yaraaday ..
Si kale haddii loo dhigo, anigu ma arko dhibku in daalacashada badani adeegsadaan isla mishiinka haddii aakhirka, ay ku kala duwanaan doonaan wax yar xagga waxqabadka iyo isticmaalka kheyraadka. in ay leeyihiin taageero ka fiican.
Dhinaca kale, loogu talagalay dadka isticmaala Opera Waxay noqon doontaa tallaabo horay loo qaaday, maaddaama boggaga qaarkood loo arki karo inay aad uga fiican yihiin barowsarkan ayaa ka dhigaya wax aan macquul ahayn in si sax ah loo daawado, laakiin waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko haddii ay markaa luminayaan dhammaan tayada wanaagsan ee barnaamijkani leeyahay.
Waan ku celinayaa, hada ma joogo meel aan si cad uga fekero mawduucan .. Sideed u aragtaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Opera waxay tagtaa Webkit
In yar yari dhaho !!! Go'aanka Opera ee u beddelashada webkit, waxaan rajeynayaa inaysan ahayn go'aannada nooca Oracle.
Ku jawaab Obux
Wararka Linux dijo
Waqtiga ayaa sheegi doona haddii go'aanka uu sax ahaa iyo in kale.
Ka jawaab Linux News
Waxaan u arkaa sidan
Aad ayaan u raacsanahay. Webkit wuxuu abuuri doonaa saameyn la mid ah tan IE6. Taasi waa sababta ilaa dhamaadka Firefox (oo ah tan ugu fudud ee lagu bilaabi karo).
Aniguba sidaas ayaan u arkaa.
Oo weliba waxaan arkayaa gacanta Google oo ay tahay inay ku bixiyaan isticmaalka Chromiun. maxaa yeelay chomium wuxuu noqon doonaa ilo aad u furan, laakiin waa nooca tijaabada ah ee Google Chrome.
Ku jawaab tanrax
Bidix u dhiib dijo
Halkaas ayey fure u noqon doontaa in Opera ay ku soo bandhigto farshaxanno iyo waxtar wax ku ool ah biraawsarka, oo ah wax ay had iyo jeer taagnaan jirtay illaa inta aan ogahay
Ku jawaab Zurdo
Ugu yaraan aniga ahaan, mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan Opera waa bilow deg deg ah.
Hagaag, inta yarayd ee naxdinta leh.
Waxaan rajeynayaa inay kaliya saameyn ku yeelaneyso waxqabadka arjiga, waxaan necbahay waqtiyada bilowga Firefox. Kooxdaydu wax yar bay haysataa waxyaalaha noocan oo kale ahna aniga ayey muhiim ii yihiin.
Waqtigan xaadirka ah wax dhib ah igama haysto daawashada degel kasta, waxaan ku kalsoonahay in tallaabadan ay wax walba si fiican u socon doonaan.
Waxaan fahansanahay in waxqabadka barnaamijku markuu socdo uu muhiim yahay, nooca ugu dambeeya ee Firefox-na wuxuu leeyahay waxqabad aad u fiican. Laakiin ma fahmin sababta "xilliyada bilowga" ee barnaamijku "aasaaska" u yihiin. " Maxay ~ muhiim u tahay in barnaamijku 2 ilbiriqsi dhaqso u bilowdo?
Waan ku raacsanahay Robert, aragtidayda inaan doorto Browser Web ah qodobbada la tixgelinayo waxay noqon doonaan: amniga / asturnaanta, xasilloonida / waxqabadka iyo shaqeynta (plugins iyo addons ayaa lagu soo gelin karaa halkan), siday u kala horreeyaan.
Raadinta dheelitirka dhibcahaas waxaan hubaa Firefox.
Dhinaca WebKit way ku wanaagsan tahay, dhinaca Opera waa tallaabo shaki leh,
Opera waxay ku qasbanaan laheyd inay horumariso (ama wanaajiso) xitaa isdhexgalka saaxiibtinimo isla markaana wax kaqoriso arintan, si loogu tartamo.
Xitaa interface saaxiibtinimo ?? kuu qeexo saaxiibtinimo adiga, fadlan: /
Waxaan ku idhaahdaa qorshe wanaagsan, maahan tartan ololaya.
Waxaan dareemayaa in Opera uu leeyahay saaxiibtinimada iyo is-beddelka ugu macquulsan ee dhammaan daalacashada madax-bannaan (mid kalena wuxuu noqon lahaa Maxthon, laakiin wali waxay kuxirantahay mashiinka IE6 iyo wax yar 7).
Waxaan aaminsanahay in Google ay galisay tikidhkooda
Maaddaama ay dhinac iska dhigeen Presto, way sii deyn karaan. Anigu shaqsiyan waxaan uqabatimay dawacada dabka, laakiin sifiican ayaan u aqaanaa sida dhakhsaha badan ee Opera had iyo jeer isu badasho (iyo waliba hal abuur cusub). Halkii laga lumi lahaa dhammaan horumarkii ka dambeeyay Presto, qaar ka mid ah taageerayaasha Opera ayaa dib u soo ceshan kara sida ay hadda tahay (ama maahan, daalacayaal kale ayaa dhalan kara ama ka dhigi kara kuwa meelaha qaarkood ku takhasusay)
Inta soo hartay, uma maleynayo inay xun tahay inay aadaan oo ay wax ku biiriyaan WebKit, had iyo jeer way wanaagsan tahay in lagu daro horumariyeyaasha mashruuc bilaash ah.
"Dawacada dabka" waa dab-damis ...
Astaantu uma eka Panda cas. In kasta oo ay yiraahdaan waxaa u waxyooday dawaco ololaysa.
Isla wixii aan u malaynayo, Presto wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan gaar ahaan cusbooneysiintii ugu dambeysay halka taageerada webGL ay ahayd mid cajiib ah. Waxay noqon doontaa qashin haddii aysan sii deyn koodhka hadhow (in kasta oo ay u badan tahay waqtiga ay samaynayaan, inuu quruxsan yahay oo uu waqtigiisii ​​dhammaaday).
Taageerayaasha Opera dijo
Waxay ila tahay talaabo istiraatiiji ah oo ay qaaday Opera, laakiin waa go'aan xun
Waxaan aqriyay bogaadin badan oo Webkit ah waxaanan qirayaa in isticmaalka Chrome ay jiraan goobo badan oo umuuqda shit Webkit, marka lama maleyn karo inay aad ugafiican tahay Presto ama Gecko,
Anigu shaqsiyan waxaan leenahay waafajin badan Presto,
Opera waa inay sii wadataa isticmaalka Presto oo ay sii deysaa furaha
Ku jawaab taageerayaasha Opera
Soo bandhigida bogga xun ma aha khalad webkit; laakiin maareeyaha.
"Opera waa inay sii wadaa isticmaalka Presto oo ay sii deysaa summada"
Waa sabab macquul ah.
Presto waxay muddo dheer ahayd Opera Software faa iidada ay ku laheyd tartankaas sababtaas darteedna waxay u ilaaliyeen ilig iyo musbaar. Haddii aad hadda furto WebKit, qayb weyn oo ka mid ah aqoonsiga Opera ayaa luntay tallaabadan ...
Go'aanka isticmaalka WebKit ee Opera waxay umuuqataa talaabo istiraatiiji ah oo looga fekerayo mustaqbalka tan iyo markii ay qaateen mid ka mid ah tiknoolajiyada furan ee sii kordheysa xilliyadii ugu dambeeyay, shaki la'aan qiimaha lagu daray Opera ayaa hadda ku jiri doonta "qurxinta" ay dhigeen WebKit, tusaale ahaan DragonFly, maareeyaha isku dhafan ee isku dhafan, iwm.
Hadda sida taageerayaasha @Opera ay dhahaan, halkii ay ka qaadan lahaayeen WebKit, waxay furi lahaayeen koodhka matoorkeeda oo ay horay u sii riixi lahaayeen; Haddii waxa ay raadinayaan ay ka mid yihiin waxyaabo kale si loo dardar-galiyo horumarinta biraawsarka (nidaamka wax lagu beddelaa waa mid si fudud loo soo raray) ama la yareeyo kharashyada ku baxa gudaha, waxay si fiican u haysan lahaayeen rukhsad Presto oo hoos timaada liisanka F / LOSS qaarkeedna sidaas ayey ku sii wateen inay iyagu iskaashadaan aqoonsiga iyo dhaqanka.
Waa inaan arkaa halka ay tani horseedeyso iyo waxa ay raadinayaan mustaqbalka fog.
Ka warran Elav.
In kasta oo sababayntaadu macno badan samaynayso, haddana waa wax aan isku dayey inaan ku muujiyo madashan laakiin waxa laga yaabaa inaanan lahayn caqli aan ku muujiyo si ku filan.
Waxa ay CTO dhahdo macno badan ayey ila sameyneysaa haddii aan diirada saarno ama aan dul marno Linux distros. Sidaan uga faalooday munaasabadaha kale, waxay la mid yihiin bariiska oo dadaalka iyo tamarta u heellan inay yeelato wax badan iyo ka sii badan ayaa tan ka dhigaysa dhamaadka maalinta inay ku milanto ama ku milmaan waqtiga.
Waxaan u maleynayaa in fekerkaan ah xoojinta iyo la shaqeynta wax soo saar laakiin la adeegsanayo aalad jirta iyo u huridda ilaha, waqtiga iyo tamarta waxay iga dhigeysaa wax badan oo wax soo saar leh marka loo eego kaligeyga oo aan ku go'doonsanaa badweynta xulashooyinka.
Ma doonayo inaan dhaho in haysashada waxyaabo kale oo badan ay xun tahay, laakiin runta markaan arko inay jiraan buntus, debianes, archeras, suseras, iwm. ama, haddii taa la waayo, qolof tan ama tan, waxay noqon lahayd xigmad iyo wax kasta oo wax soo saar leh iyadoo laga faa'iideysanayo waxa jira, waxay horumarin lahaayeen oo ka shaqeyn lahaayeen qalab si loo siiyo dhammaystirka la doonayo miiska la doonayo.
Waxaan idin siinayaa tusaalaha SolusOS (Ikey) maxaa diidaya inaad ku shaqeysaan ilaha iyo agabyada ay GNOME u leedahay inay qolofku siiso dhameystirkeeda, iyadoo laga faa'iideysanayo awooda buuxda ee qolofta lafteeda. Waxaan ula jeedaa, ma xaddidayo hal-abuurka iyo rabitaanka in wax cusub la qabto, laakiin runta iyo in si cad loo sheego oo qabow lagu lafo guro, keenista xad-dhaafka ahi way u xun tahay sida ka soo horjeedka oo badiyaa waxay keentaa in loo maro habeyn la'aan asalka.
Waa inaan waqti siino oo aan aragno natiijada ka soo baxda go'aankan.
Waad saxan tahay, dhibaatada kaliya ee jirta ayaa ah isku urursiga awooda, marka uu jiro qof leh wax kabadan 50% suuqa waa inay jiraan laba ama seddex bedel oo kale.
ps: waxaan rajeyneynaa in haajiritaankani uusan jebin doonin tayada weyn ee opera ee ka shaqeynta kumbuyuutarrada ilaha yar, iyo in si caqligal ah loo isticmaalo wananka la heli karo.
Waa run waxaad sheegto, maadaama aan ku dhici lahayn isla arrimaha M $ iyo tufaaxa. Marka laga eego aragtideyda shaqsiyadeed iyo xirfadeedba, waxaa jira noocyo badan oo wax walba ah. Mabda 'ahaan waan jeclahay tan, laakiin markii xad-dhaaf la gaaro, kii hore xooggiisu wuu daciifayaa.
Waxaan ku siinayaa, tusaale ahaan, kiiska GNOME (oo aan u adeegsado) Shell, waxaan u maleynayaa inay ka wax soo saar badan tahay oo la jeclaan lahaa marka loo eego dhammaan dadaalada kooxda Elementary, SolusOS, Mint, iwm. (si aan u siiyo tusaalooyin) marka la samaynayo noocyo kala duwan maxaa yeelay ma jecli sidan ama tan, ka shaqaynta samaynta kordhinta iyo inay kuwani ahaayeen mishiinka isbeddelka ku yimaada shellka laftiisa; Aad ayey u badan tahay in kooxda GNOME lafteeda ay ka shaqeyneyso fidin kuu oggolaan doonta adiga (sida lagu arkay boggooda) inaad yeelato miisaska caadiga ah adoo adeegsanaya ballaadhinta taasna waxay la jaan qaadi doontaa inta u dhexeysa sii deynta kala duwan ee la daabacay.
Wax aan rabo inaan ku daro.
Maaha in waxa la qabtay ay khaldan yihiin, tani way kobcinaysaa laakiin adduunka Linux ayaa u baahan xoogag ee uma baahna daciifnimo. Waxaan aaminsanahay inay ka wanaagsan tahay in la sameeyo xoog, xasilooni, is waafajin iyo is dhexgal waxa jira halkii laga samayn lahaa waxyaabo badan oo wax walbana ay sidii hore ahaadaan.
Horaa loo yidhi "kii wax badan daboola, wax yar baa tuujiya"
Arrin ku saabsan habab, barnaamijka bilaashka ah ma jiro wax khasaaray ama qashin tamar ah, xitaa haddii mashruuca la joojiyo inta koodhka ilaha la heli karo, qof kale ayaa isticmaali kara, iyadoon loo eegin inayna la wadaagin aragtida ama dhadhanka soo-saaraha ugu horreeya.
Mararka qaarkood waxaan ku degdegaynaa inaan qiimeeyno wax soo saarka oo aan ilaawno in software-ka bilaashka ah uusan raadineynin inuu horumariyo laakiin inuu horumariyo. Haddii aan diirada saarno nadiifinta nidaam, yaa ikhtiraacaya waxyaabaha cusub?
@staff Si wax loo cusbooneysiiyo waxaa had iyo jeer jiri doona dad, badiyaa waxaa jira in yar oo hal-abuurnimo leh, laakiin aqlabiyadda badankood wax ma cusbooneysiiyaan, koobiyeeyaan, midab beddelaan oo hal xariiq oo dheeri ah dhigaan, fargeetigana wuxuu ugu yeeraa barnaamij cusub. Waxa Linux u baahan tahay desktop-ka ayaa ah dadaal wadajir ah oo lagu doonayo in laga dhigo mid aad u adag (marka lagu daro KDE), wax laga beddeli karo iwm ..., laakiin aakhirka, sii wad aaminaadda in fasaadnimada iyo xorriyadda ay isku mid yihiin.
@ pandev92, Waxa Linux ubaahantahay waa fikirkaaga ma ahan mid aad u liidata, nasiib wanaag dadka isticmaala / horumariyayaashu waajib kuma aha inay hoosta iska hoos dhigaan aragtiyada, falsafada ama dhadhanka qof kasta oo aan iyagu ahayn marka aysan mushahar ku haysan shaqada ay qabtaan . Taasina waa wax uun laakiin fasaadin, ama ugu yaraan qaamuusku ma haysto qeexitaan ku saabsan fasaadin u dhiganta.
Waxaan marwalba usheegayaa shaqaalaha, in Linux kudhowaad cidna aysan wax abuurin, marka laga reebo dhowr horumariyeyaal lacag leh, koofiyad cas, intel, ubuntu ama unlockuse. Iyo maya, xorriyaddu macnaheedu ma aha in qashin badan la sameeyo iyada oo aan la hagaajin ..., maahan hoosaad, ee waa caqliga saliimka ah, laakiin la hadalka dadka sidaada oo kale ah waxay ula hadlayaan sidii baqal oo kale, hubaal waxaad dhihi kartaa gimp waa ka fiican Photoshop ama libreoffice ayaa ka fiican ms office 2013.
Waad sii waddaa doodda adigoon salka ku hayn la xaqiijin karin, oo keliya aragtidaada, taas oo habka loo beddelo marka la muujiyo inaadan haysan qeexitaanno cad.
Haddii aad tixgeliso in dadaalka qof u sameeyo wax ay jecel yihiin, raaxeysiga shaqsi ahaaneed iyo marka lagu daro inay la wadaagaan dadka kale, waa qashin, sababtoo ah waxaan ku celinayaa in tani ay tahay ra'yigaaga oo keliya, iyo sida aad u leedahay faallooyinkaaga kale ra'yi ay ka buuxdo naceyb iyo isla weyni, fiiri adigoo iska dhigaya inaad ogtahay waxa aan u maleynayo tan ama softiweerka adigoon i ogeyn (oo aan ku xusin inaad ila mid tihiin xayawaan) kuna dhiiran inaad u sheegto kuwa horumariya waxa ugu wanaagsan GNU / Linux ee ku saleysan shuruudahaaga shaqsiyeed .
Sidii aan ku xusay @jorgemanjarrezlerma, waa su'aal ku wajahan, barnaamijka uu madaxweyne, guddi ama hay'ad kale ku amrayaan wadada loo socdo, horumar ayaa jira, maxaa yeelay ujeeddooyinka ugu dambeeya midkood waa sheyga (dabcan, in dhamaadka waxaad ku sii deyn kartaa lambarkaas liisanka bilaashka ah); Dhinaca kale, barnaamijka bilaashka ah, ujeeddada ugu dambeysa waa adeegsadaha, maahan sheyga, iyo halkii laga horumarin lahaa, waxaa jira isbeddel (ereyadan waa inay noqdaan kuwo cad); Sidaa darteed, waa qaabab kala duwan, (Waxaan jeclaan lahaa inay weli jiraan hal ama dinosaur kale, laakiin maxaan sameyneynaa?) Evolution waa geedi socod gaabis ah, oo ay ka buuxaan ciqaabyo ku saleysan xulashada kuwa ugu xoogga badan, kiiskan, the in ay ka hesho taageero dheeri ah bulshada iyo jeclaanta isticmaaleyaasha (qasab maahan "kan ugu fiican", marka loo eego xigashooyinka maxaa yeelay ereygu waa xoogaa mowduuc), laakiin mararka qaar degdegayaga iyo welwelka aan ka qabno kan ugu fiican "hadda!" waxay noo ogolaaneysaa inaan aragno taas, wayna kasii xumaaneysaa markaan ku darno isla'egta iskuna dayno inaan dardar galino horumarka iyadoon waxba lagu darsan.
Midka dalbanaya in horumariyeyaashu ay ku biiraan xoogagga si ay kor ugu qaadaan DE-da ugu wanaagsan ee GNU / Linux, ka dibna ay iyaga bixiso, muddo, maxaa yeelay waajib kuma laha.
Ha ka welwelin maya, waxba ka weydiisan maayo shayaadiinta, qof kasta oo doonaya inuu sii wado sameynta softiweerrada wax qarxa, qofkii doonaya inuu sii wado abuurista kun ciyaartoy oo isku mid ah oo aan midkoodna si fiican u shaqeynin, sii wad isticmaalkiisa, waxaan isticmaalaa mac osx iyo mashruucyada yar ee softiweerka bilaashka ah ee aan u arko wanaag, inkscape, gimp, clementine….
Haa, waad sameyn kartaa waxaad jeceshahay, laakiin taasi micnaheedu maaha maadaama ay labo idinka mid ah sameynayaan, in software-ka uusan lahayn wax tayo ah oo aad waqtiga isaga luminayso. Software aan waxtar lahayn. Mahadsanid waa in lasiiyaa shirkadaha sida Canonica, Red Hat, Opensuse, oo uguyaraan wax qabta waxtar leh. Barnaamijka bilaashka ah, ujeedada ugu dambeysa ee kiisaska yar ayaa ah adeegsadaha, maxaa yeelay isticmaalaha waa in la siiyaa kan ugu fiican, kan ugu qurxan qurxinta, kan ugu fiican ee shaqeynaya, inta badan waqtiga kaliya ee ay u adeegtaa waa laba ama saddex Dadka ku jira rabitaankooda shakhsi ahaaneed ee ah inay istaagaan, waxay rabaan inay iska dhigaan sida ay u fiican yihiin iyaga oo dib u cusbooneysiinaya gawaarida (oo sidoo kale ku dhaca midka gaarka ah), laakiin wax kale ma jiraan…, hadda adiga ayaa jooga. Aniga ma badalo fikradaha, waligay ma aanan sameyn, waxaan xagjir ka dhigaa inta ugu badan, marka ha dhihin wax aanan dhihin, kaliya waxaad u maleyneysaa inaad si fiican wax u qortid, maadaama aad wax badan qorto waxna aadan dhihin, sida aan ku dhahno Talyaaniga * Tutto fumo e niente arrosto *
@ pandev92 Awooddaada is-nuugista marna kama joogsato inay iga yaabiso.
Ma aqaano waxa kaa dhigaya inaad aniga ama qof kale ka walaacdo inaad wax qabato ama aad isticmaasho iyo haddii kale.
Dhammaan kuwa u qalma ee aad u sameyso shaqada dadka qaar, waxaan ku celinayaa, waa fikraddaada, sida ixtiraam leh laakiin aan muhiim ahayn sida kuwa kale.
Qeyb weyn (laga yaabee inta badan) bulshada GNU / Linux waxay u mahadcelinayaan shirkadahan (aniga dhexdooda), xitaa waxay helayaan magdhow lacageed oo ku darsaday (iska ilaali taas).
Software-ka bilaashka ah (mana ahan fikirkeyga) waxaa loola dan leeyahay isticmaalaha, sidaa darteed badanaa waxay raadineysaa inay ilaaliso waxa ugu muhiimsan, amniga, sharafta, asturnaanta, anshaxa iyo anshaxa, xorriyadooda ayaa socota.
Qurxinta jirka iyo sahlanaanta isticmaalku waxay ku qaadanayaan kursiga dambe.
Haddii sidaad u tiri, aadan beddelin fikradahaaga oo aad weli u malaynaysid in kulliyadda ay SF u fidiso kuwa horumariya inay abuuraan kun iyo hal fargeeto ma aha xorriyadda laakiin waa fasaad, markaa waxaad leedahay laba jibbaar, maxaa yeelay dhowr qoraal oo hoose waxaad ku leedahay a liisanka kuu oggolaanaya inaad wax ka beddesho (abuur fargeetoyo ka mid ah) oo xitaa xiro lambarka, waa bilaash badan.
Waxaan u maleynayaa inaan ku faraxsanahay inaan dhaho wax yar inta udhaxeysa ereyada badan, maxaa yeelay wax yar waan ku taageeri karaa xaqiiqda iyo xogta dhabta ah, kaliya ma ahan inaan caqli ku yeesho fekerkeyga.
Anigu ma raacsani, waxaan u maleynayaa in isbarbardhigga GNU / Linux ay khalad tahay maxaa yeelay si sax ah dhammaan (ama ku dhowaad dhammaan) qaybinta waxay wadaagaan isla "saldhig" lambar (kernel, maktabadda C, Xorg, iwm), sidaas darteed waa la mid sida aad ugu ammaantay Marka laga hadlayo daalacayaasha, in uu jiro saldhig "u gaar ah" iyo in halkaa laga beddelayo heer ka sarreeya (is-dhexgalka, tusaale ahaan). Nidaamyada xirmooyinka ee 'distros', sax ayaan ku noqon karaa, laakiin waxaan wada ognahay in "kordhintu" aysan iswaafaqi karin daalacayaasha kala duwan xitaa haddii ay isku mashiin isticmaalaan. Labada kiis waa isku mid.
Horeyba waxaa loo huray, mashin
qaybtayda waxaan ku leeyahay dhadhan dhadhan macaan oo ku jira afkayga, maadaama iswaafajintu ay tahay wax lagu daro, laakiin dhaqdhaqaaqani wuxuu jabiyaa xorriyadda, inkasta oo webkitku uu lacag la’aan yahay, haddana waxaannu bilaabi doonnaa barnaamijyo loogu talagalay webkit ee looguma talagelin webka sida ay u sameysay meg oo leh chrome, markaa waxay noqon doontaa iexplore 2.0, aad u xun
hadda dareenka iyo sida, Uma maleynayo inay wax badan isbeddeleyso, waxaan rajeynayaa sidaas, faa'iidada weyn ee opera ayaa ah inay ka timaado warshad diyaar u ah wax walba ...
Waxaan u arkaa mustaqbalka inay yihiin wax udhaxeeya opera-da hadda jira iyo biraawsarka yandex, laakiin iskuxirka opera ee isku dhafan, mashiinka rss, m2 (macmiilka boostada), soo dejinta iyo maamulaha daadka, iyo kordhintiisa
waxaana qabaa in mashiinka mashiinka loo beddelo midab aqriya midab leh, oo aan waxba lagu qorin guriga about
riyadu waxba ma gasho
Kaliya tixgeli in webkit uusan xor aheyn, waa furan yahay. Iyo biraawsarayaal aad iyo aad u badan oo adeegsanaya, waxay ku socotaa jidka, sidaad u leedahay, ee ah iE kii ugu horreeyay.
Waxyaabaha qosolka leh ayaa ah in daalacashada badan ee GNU / Linux gudaheeda ah ay qaadanayaan .. walwal ayaa leh tan ..
maadaama aysan bilaash ahayn, by ideals?
Waa ilo furan, oo aan la mid ahayn bilaash. Sida @RudaMacho ay tilmaamtay, waxaa ku jira qaybo hoos yimaada shatiga GPL (qaybtaas waa bilaash) iyo BSD (tani waa isha furan), laakiin unug ahaan looma tixgelin karo barnaamij bilaash ah.
Waan ka xumahay inaan kaa hor imaado, laakiin BSD weli way ka xor badan tahay GPL-ka.
Waa maxay waali qaar baa qaba. BSD softiweerka ruqsad haysta waa barnaamij bilaash ah. Arrin kale ayaa ah in aysan ahayn shati ay soo jeedisay FSF.
Aan aragno, waxaan u maleynayaa inaan wax jahwareerineyno, ma dhiibanayo fikrado bilaa aasaas ama falsafad ku saleysan, hadii aan ilaaliyo in webkit-ka uu yahay mid furan waa sababta oo ah iyagu sidaas ayey isku magacaabeen.
Waa ku filan tahay in la akhriyo ma aha cutubkeeda koowaad, laakiin cinwaankiisa, "Mashruuca WebKit Open Source" si aad u ogaato inuu yahay mashruuc il furan, ka dib waxaad dib u eegi kartaa qeexitaanka isha furan iyo softiweer ee labadaba ilo lagu kalsoon yahay sida wikipedia si loo arko inaysan isku mid ahayn.
In liisanka BSD uu ka xor badan yahay GPL-ka waa qodob gooni ah, umana maleynayo inaan waligay xusin wax tilmaamaya wax liddi ku ah ama ku raacsan.
Aad uma fahmi karo adiga @staff. Dhib malahan sida ay isku magacaabaan. Software kasta oo leh rukhsadaha GPL + BSD waa barnaamij bilaash ah sida ay u furan tahay. Ka raadi BSD halkan:
Ma aqaano haddii tani ay mar hore ula jeeddo qas-wadareed markaa waan ku celinayaa oo xiganayaa:
"In liisanka BSD uu ka xor badan yahay GPL waa qodob gooni ah" Uma dhigaayo wax sidaas oo kale ah dood, gaar ahaan markii lagu sameeyo hoosaadyada sida "si kasta oo ay isku sheegaan". Haddii aan dhinac marno kooxda Webkit, markaa maxay tani ku saabsan tahay? haddii aan sidan ku sii socono, waxaan ku dhici karnaa xaqiiqda ah inaysan macno lahayn waxa ay ugu yeeraan shatiga BSD oo ay ku yimaadaan wax aan jirin.
Laga yaabee inaad i fahanto waa inaad cadeysaa sababta Webkit loogu tixgelinayo inuu yahay il furan, laakiin waa inaad iyaga weydiisataa, maxaa yeelay ma ahan wax aan halkan kaga hadlayo.
@staff. Aan aragno haddii aan caddeeyo: Haddii aad weydiiso Stallman wuxuu kuu sheegayaa in Linux-libre ay tahay software bilaash ah. Haddii aad weydiiso Raymond wuxuu kuu sheegayaa inay tahay isha furan. Waxaa jira dad doorbidaya madaahibta "isha furan" iyo dadka kale ee ku khamaara "software-ka bilaashka ah". Si kasta oo ay ugu yeeraan, waxa muhiimka ahi waa rukhsadaha ku dhaca qeexitaannadaas (waana isku mid isku mid). Webkit maahan il furan maxaa yeelay horumarayaasheeda ayaa sidaas leh. Haddii aan abuuro softiweer oo aanan fursad u siinin koodhka, wuxuu noqon doonaa il isku xidhan oo isha laga soo qaato iyo softiweer lahaansho isku mid ah (dhib malahan waxa aan ugu yeedho).
@ Windóusico Hada hadaad igu qancisay inay tani tahay isku day la isku dayo.
Marka hore ma aadan fahmin oo hadda adiga ayaa ah kan ii caddaynaya aniga, xiisaha.
Waad ku sii socotaa baahidaas inaad faallo ka bixiso qeexitaannada ku saabsan falsafadda (bilowgii waxaan idhi ujeedkaygu ma ahayn), tan waxaad u adeegsanaysaa doodo ku saleysan dulsaar la'aan fikradda soo-saaraha iyo ka sii xun, waxaad u maleyneyso dadka kale Waxay u maleynayaan, ama miyaad horeyba ula soo hadashay Stallman iyo Raymond?
Haddii aad rabto inaad qof ku qanciso in Webkit uu yahay softiweer bilaash ah oo ku saleysan waxaad ku fahamtay, waxaan kugula talin lahaa inaad la socoto horumariyeyaasheeda oo aad fikirkaaga la wadaagto, waxaa jiri kara xoogaa saameyn ah, laakiin aniga ila ah inaan ku saleynayo qeexitaanka suugaanta oo aanan ku saleysneyn fasiraadda shaqsiyeed waa mid aan macno lahayn.
morpheus, ha u isticmaalin demagoguery, xorriyadda aadanaha, looma barbar dhigi karo tan koodhka, koodhku maahan qof, xuquuqna uma lahan oo iyagu kama ahan wax ka fudud khadadka fudud.
Midda kale, liisanka BSD Kuuma ogolaanayo inaad xirto lambarka aad ku siidaysay liisankaas, laakiin wuxuu kuu oggolaanayaa inaad qaadato lambarkaas si aad u sameysid waxyaabo ka soo horjeedda lahaanshaha, laakiin lambarka ugu horreeya ee aad ku sii deysay BSD, weli waa BSD, AAN ARAGNO haddii aan ogaanno.
@staff. Kuma fahmin adiga iyo KADIB (markaan aqrinayo fariintaada kale) waxaan arkay inaad jahwareer qabtid (oo aad ilaaliso). Waxaan kugula talinayaa inaad akhrido buugan uu qoray Stallman (waad u baahan tahay):
Si taxaddar leh u akhri bogagga 42 iyo 43. Webkit waa barnaamij bilaash ah iyo ilo furan (labadaba isla mar). Soo-saareyaasha Webkit waxay la dhacsan yihiin OSI (mana ahan FSF), waana sababta ay u doorbidayaan "il furan". Waxaad ku qortay "Webkit maahan lacag la'aan, way furantahay" taasina waa wax aan macquul ahayn (sida faallooyinka intiisa kale) laakiin naftaada.
@ Windóusico, Marka la qeexo, dhammaan softiweeryada bilaashka ahi waxay ku habboon yihiin qaybta isha furan laakiin ma aha dhammaan ilaha u furan qaybta barnaamijka bilaashka ah. haddaba, haysashada jajabka software-ka bilaashka ah macnaheedu maaha in unug ahaan loo tixgelin karo sida oo kale.
Sabab la mid ah ayaa noqon doonta in la yiraahdo: Buuggan wuxuu ka hadlayaa naasleyda; eeyadu waa niman xayawaan ah, markaa kani waa buug eey.
Tusaale kale: Dhamaan SL waxay kuxirantahay GNU / Linux, marka GNU / Linux waa SL. (Waxaan u maleynayaa inay taasi kaa dhigtay inaad u maleyso inaad qiyaasi karto waxa Stallman dhihi lahaa)
Laakiin sababayntaasi sidoo kale waa khalad, eeg uun http://www.gnu.org/distros/free-distros.html.
Haddii aan kuu sheego in softiweer ka kooban qaybo ka mid ah isha furan looma tixgelin karo softiweer bilaash ah, sababtuna ma ahan hawlahayga, waa sababta oo ah qeexitaankeeda ayaa astaan ​​u ah sidaas, aan u adeegsado ilahaaga inaan ku caddeeyo.
"Ereyada 'softiweer bilaash ah' iyo 'isha furan' waxay sharraxayaan wax kayar ama kayar isla qaybta software-ka, LAAKIIN WAXAY KU HAYBAYAAN WAXYAABO KALA DUWAN OO KU SAABSAN SOFTWARE IYO QIIMAHA AY LEEDAHAY."
@staff, Waxaan u maleynayaa inaadan fahmin sadarkaas aad sheegaysid. Waxa aad ku qortay xarfaha waa fikradaha iyo fikradaha falsafadeed ee aad sheegtay inaad iska indhatirto (sifiican ayuu u sharaxayaa goor dambe) Ku dhaji qaybta oraneysa "Ereyada" softiweerka bilaashka ah "iyo" isha furan "waxay sharraxayaan wax kabadan ama kayar isla qaybta barnaamijka" kadibna akhri faallada ugu horreysa ee aan uga jawaabo.
Sidoo kale waxaan ku xasuusinayaa inaynaan ka wada hadleynin in dhammaan barnaamijyada furan ee furan ay yihiin barnaamijyo bilaash ah (waxaa jira dhowr shati oo aan la wadaagin). Waxa aan kula doodayo ayaa ah Webkit waa barnaamij bilaash ah iyo ilo furan. Stallman wuxuu wadahadalkiisa u arkaa software-ka bilaashka ah inay yihiin softiweer kasta oo fuliya xorriyadaha caanka ah wuxuuna dadka ka codsadaa inaysan isticmaalin ereyga "il furan". Markaa jooji ku celcelinta in Webkit uusan ahayn barnaamij bilaash ah.
Iyo si loo xalliyo arrinta mar uun iyo dhammaanteed waxaan kuu sheegi doonaa in software-ka leh rukhsadaha BSD iyo GPL ay ixtiraamaan xorriyadda dadka isticmaala, sidaas darteed waa software bilaash ah. Marka Webkit (BSD + GPL) waa barnaamij bilaash ah (waxay dammaanad qaadaysaa afarta xorriyadood). Si deggan u aqri buugga.
Marka waa inaan fahmo qoraal aan macno ahaan ahayn, laakiin sidaad tixgelisay? Mise waa inaan akhriyo oo keliya qaybaha aad suulka ugu dhiibayso si ay ugu habboonaadaan fikradahaaga?
Aan kuu siyaadiyo xigashada aad sheegayso ee ku saabsan miyuusigga (isla shaqooyinka suugaanta, ama wax kastoo aad doorbido.) Si aan u arko inay ka sii cad tahay iyo in kale.
"Erayada 'Birta Madow' iyo 'Birta Dhimashada' waxay sharraxaysaa wax ka yar ama ka yar isla qaybta muusigga"
Adoo raacaya caqligaaga (inaad si buuxda wax u aqrinin maxaa yeelay waxa soo socda aniga iguma habboon) Waxaan ka garan karaa inay isku mid yihiin, kaliya in qaar door bidaan inay ugu yeeraan hal dhinac ama mid kale, laakiin waxaa kaliya laguu oggol yahay inaad ugu wacdo sida ay aniga ila tahay, xitaa haddii aan ogahay waxay ka duwan tahay isla fikradda laxamiistaha ee muusigga.
"In kabadan ama kayar" uma dhigmo "siman."
Waxaa laga yaabaa in is faham la'aani ay tahay mid ku saabsan fikradaha, waxaad u dhigantaa softiweer bilaash ah ilaha furan, taas oo qeexitaankeeda (maahan inaan sidaas u dhaho) run maahan.
Waxaad sidoo kale isku qaldaa ixtiraamka iyo dammaanadda,
«BSD iyo GPL waxay ixtiraamaan xorriyadda dadka isticmaala, sidaas darteed waa software bilaash ah. Marka Webkit (BSD + GPL) waa barnaamij bilaash ah (wuxuu dammaanad qaadayaa afarta xorriyadood) »
Dammaanad qaad iyo ixtiraam isku mid ma aha.
Dhalo biyo ka buuxaan oo leh halyeeyga, waxaad u qalantaa inaadan gubasho u geysan qorraxda, ma ahan shaashadda qorraxda kaliya maxaa yeelay waxay ixtiraamaysaa xuquuqdayda inaan naftayda uga ilaaliyo shucaaca UV, shaashadda qorraxda ayaa ah tan dammaanad qaadda (iyadoo ku saleysan fursadaha ay leedahay) taasi yaanay igu dhicin.
Qeexitaanka, ixtiraamku waa ku filan yahay, laakiin ku celcelin ahaan waa inuu damaanad qaadaa.
Taasi waa sababta wikipedia u muujiso:
Xorriyadda software-ka bilaashka ah
Maqaalka ugu weyn: Qeexitaanka Barnaamijka Bilaashka ah.
Sida ku cad qeexitaankan, softiweerku waa "bilaash" markay damaanad qaadayaan xorriyadaha soo socda:… »
Waxa kale oo aad tusaale khaldan ka bixisay markii aad dhahday barnaamij waad abuuri kartaa oo waxaad ka dhigi kartaa lahaansho kaliya adigoon tusin lambarka, taasi waa been abuur si fudud loo xaqiijin karo; Waan abuuri karaa barnaamij oo aan tusi karaa koodhkiisa laakiin waxaan ku qaybin karaa liisanka oo aan u oggolaanayn isticmaalkiisa, wax ka beddeliddooda, ama koobiyeyntiisa oggolaanshahayga la'aanteed, markaa haddii ay noqoto mid lahaansho, iyadoon loo eegin haddii kuwa kale ay marin u heli karaan lambarka.
@staff jooji isku dayga ah inuu qaso mowduuca. Haddii aan ku siiyo laba-labar oo aan marin u helin lambarka, taasi waa lahaansho iyo softiweer ilo wareed illaa aan ka caddeeyo si kale. Haddii aan siiyo marin u helka koodhka laakiin aan dhigo ruqsad lahaansho, sidoo kale waa ilo xiran sida ku xusan OSI (wax aad diidan tahay inaad fahanto) iyo softiweer lahaansho.
Inta soo hartayna, waxaad sii wadaysaa qiiqa si aad u qariso beenta weyn ee ah in Webkit uusan aheyn barnaamij bilaash ah. Ii sheeg waxa ay xorriyadaha Webkit dammaanad qaadi weydo inta aad ogtahay. FSF waxay tixgelineysaa rukhsadaha BSD + GPL inay iswaafaqsan yihiin waxayna ku dhacdaa qaybta barnaamijka bilaashka ah. Taasi waa saas, maahan fasiraaddaydu. Haddii aad si taxaddar leh u akhrido xiriiriyahayga, horay ayaad u ogaan lahayd.
Sida "Birta Madow" iyo "Birta Dhimashada" Ma aqaan noocyadaas, laakiin haddii ay la wadaagaan kooxo isku mid ah muusig dhowr jeer oo laga reebo, markaa waan aqbalayaa (in kasta oo aysan dooddayda burinayn).
Waayahay, waxaan gaarnay heer ah inaadan dood dambe heysan oo weeraradu waxoogaa toos ah ayey bilaaban doonaan, waxaad tihiin heer sare oo heer sare ah.
Haddii aad u maleyneyso inaan isku dhejinayo ama aan sigaar cabayo si aan u daboolo beenta, waxaan ku celinayaa wixii aan soo dhigay bilowgii.
Haddii aan idhaahdo webkit waa il furan waa sababta oo ah iyagu naftooda ayey isku magacaabaan taas, waana sii wadi doonaa sidaas sababta oo ah kooxdooda horumarineed ayaa ah ilo aad looga kalsoonaan karo adiga iyo falsafadaada oo aan ahayn fikradaha suugaaneed ee qeexitaanka barnaamijyada bilaashka ah, ilaha furan , koodh xidhan, softiweeriya lahaansho, xushmad iyo dammaanad.
Taas oo aad damacsan tahay inaad ku taageerto iyada oo ku saleysan waxa aad u maleyneyso in tani ama dabeecaddaas ay oran laheyd, ama ilo ay tahay in loo fasiro sida aad adigu u oggoshahay oo keliya.
Haddii aad u aragto in isla webkitku khaldan yahay, waa fikraddaada, haddii aad xiisaynaysana inay joojiyaan wicitaanka webkit ee furan, iyaga ayay tahay inaad saxdo.
Marka laga hadlayo tusaalaha muusigga, ma aqaano sababta aad u dhaheyso inaysan dooddaada burinayn, haddii aad adigu laftaadu aqbasho in doodda aad soo xigatay ay noqon karto mid ansax ah laakiin aad ka beddesho nuxurkeeda si aad u toosiso tarjumaadda sida ugu habboon.
Qaladkaaga oo ah inaad gudbiso barnaamij bilaa summad ah waxay u rogaysaa softiweer lahaansho, waan sharxayaa.
Software-ku wuxuu noqdaa mid lahaansho leh, haddii, iyo haddii keliya, wuxuu ku jiraa shatiga lahaanshaha.
Tusaale, waxaad sameysaa barnaamijkaaga waxaadna cunaysaa USB-ga uu koodhku ku jiray, diyaar. Anigu waan qaataa barnaamijka, waan kala qaadaa, nuqul ka sameeyaa, wax ka beddelaa, oo aan ku sii kala qaadaa liisanka 'X' laakiin waxba kama qaban kartid inaad iga horjoogsato inaan sameeyo ama aad ku bixiso xabsi / lacag caddaan ah haddii aan sameeyo, maxaa yeelay ma lihid ruqsad lahaansho.
Waxaan fahansanahay in arimuhu aysan aheyn cadaan ama madow, laakiin waxaan isku dayay inaan ku fahmo in cawlku uusan cadaan iyo madow midna ahayn.
Barnaamijku wuxuu isku daraa qaybo ka mid ah software bilaash ah + X wax, wuxuu joojiyaa inuu noqdo barnaamij bilaash ah.
Haddii aan haysto giraan 10 garaam oo dahab ah iyo 10 garaam oo lacag ah, waa dahab IYO qalin, laakiin ma dhex wareegi karo anigoo dunida u sheegaya inaan iibinayo faraantigayga dahabka ah ee 20 garaam.
Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in si cad looga hadlo fikradaha.
Taasi "FSF waxay tixgelinaysaa rukhsadaha BSD + GPL oo waxay ku dhacayaan qaybta barnaamijyada bilaashka ah." waa uun wixii aanan doonayn in aan ku gaadho maxaa yeelay waa arin gooni ah waxayna nagu qasbeysaa in aan soo bandhigno shuruudo cusub sida "softiweer bilaash ah oo la ogolaado" (taas oo aan ahayn software bilaash ah, waa software la ogolaado oo bilaash ah).
Taasi waa sababta aynaan u dhihi karin dhib malahan sida ay isugu yeeraan webkit, hadii dhamaadka maalinta ay yihiin waxa fikradahooda iyo falsafadahoodu ogyihiin (ma ahan wax aan saameyn ku yeelan karno) marka laga soo tago inay leeyihiin mudnaan iyo aqoonsi ku filan sidaa darteed Waad u maleyn kartaa in haddii loogu yeero il furan aysan ku sameyn jaahilnimo dartiis.
@staff. Ruqsadda softiweer ee bilaashka ah waa rukhsad software oo bilaash ah. Webkit wuxuu isticmaalaa oo keliya rukhsadaha softiweerka bilaashka ah, sidaa darteed waa software bilaash ah. Waxyaabaha kale oo dhami waa kuwo aan faa iido lahayn.
Haddii aan abuuro softiweer oo aan idhaahdo way ka ruqsadaysan tahay GPL laakiin anigu ma bixiyo koodhka ilaha, ma noqon doono barnaamij bilaash ah illaa aan ka oggolaado helitaanka koodhkaas sababta oo ah liisanka ayaa u baahan. Eeg "illaa inta si kale loo caddeeyo" nuance waa mid aad muhiim u ah. By the way, anigu ma aan ogayn in ay ahayd wax fudud in loo gudbiyo fulin ah in code binary in code isha, injineernimada beddeli waa in ciyaarta ilmaha. Ma fahmin sababta Stallman ugu adkeysanayo inaan wadaagno koodhka isha haddii ay fududahay in laga helo fulinta.
Waxaan horey kuugu sheegay in horumariyaasha Webkit aysan la jaanqaadin himilooyinka FSF, taasi waa sababta ay u adeegsadaan sheyga "isha furan". Ma jirto sabab farsamo ama sharci oo loogu yeedho softiweer bilaash ah.
Waxaan kugu dhiirigalinayaa inaad halkan iiga jawaabto (iyo habka akhriska):
Waxyaabaha aad sheegto run maahan sababta oo ah waxaad u tiri, waxaad kaliya u dhiibaneysaa fikradahaaga sida xaqiiqooyin.
Iminkana markaad sii waddo foorarsiga bilaa aasaaska waxaad badalaysaa doodahaaga, daliil ahaan waan kuu soo xiganayaa:
»Haddii aan abuuro softiweer oo aanan fursad u siinin koodhku, waxay noqon doontaa mid isku xidha ilaha iyo softiweerku isla wakhtigaas»
Waxaan cadeeyay inaad qaldantahay hadana waxaad isku badashay:
"Haddii aan abuuro softiweer oo aan idhaahdo WAA LLIISSANO GLLL laakiin anigu ma keenayo koodhka ilaha, ma noqon doono barnaamij bilaash ah"
Haddana taasi waxba kama dhimayaan markaan idhaahdo software-ku wuxuu noqonayaa lahaansho keliya haddii uu ku jiro liisanka lahaanshaha.
Waxaa macquul ah inaad wali aaminsantahay in hadii arimuhu aysan cadaan inay madow yihiin, hadii uusan softiweerku xor aheyn macnaheedu maahan inay tahay mid lahaansho leh.
Qeexitaan ahaan, haddii barnaamijku uusan ku damaanad qaadaynin xorriyaddaada ruqsad, laakiin sidoo kale kaaama xayuubineyno adiga oo adeegsanaya rukhsad kale, maahan lahaansho iyo lacag la'aan.
Anigu ma dhihin in injineernimada beddelka ah ay fududahay, laakiin illaa iyo inta aysan macquul ahayn dooddaydu way ansax tahay oo macnawigaaga ayaan khusayn.
Sidoo kale shay kale oo aanad moodaa inaad ogtahay ayaa ah in dhamaan softiweerku aanu u qaybsamin qaab binary isla markaana software-ka aanu ahayn koodhka kaliya.
Weli miyaad ku hanweyn tahay inaad iska dhigto inaad ogtahay waxa dadka kale u maleynayaan, ama sidee ku ogtahay fikradaha ay dhammaan taageerayaasha webkit taageeraan? fikradahaas shakhsiga ahi ma aha doodo sax ah.
Waxaan ku celinayaa: Aniga macno malahan in laygu hago waxa blogger aan aqoonsi lahayn uu sheegayo oo adeegsanaya istiraatiijiyado dood badan oo been abuur ah.
Waxaan ku hubinayaa anigoo soo xiganaya:
“Qaar waxay dhahaan 'in kabadan ama kayar isla qaybta barnaamijka' waxay ka dhigan tahay inay yihiin laba qaybood oo kala duwan. Taasi waa been. "
Fikrad fudud oo aan qiimo lahayn markaad u tagto qaamuuska oo aad hubiso in wax badan ama ka yar ay tixraaci karaan wax la mid ah ama wax qiyaas ah, laakiin u dhigma maaha isla.
"Stallman wuxuu u dhigay 'wax ka yar ama ka yar' si aan farahiisa loo qabsan maxaa yeelay OSI-du waxay aqbashaa ruqsadaha ay diiddo FSF (iyo taa beddelkeeda)."
Waxyaabaha kor ku xusan waa kala duwanaanshaha fallacy ad verecundiam, taas oo aad ku difaaceyso aragti ku saleysan waxa qof caan ah oo mowduuca ahi u maleynayo.
Xaaladdan oo kale, waxa blogger u maleeyo dabeecadda u malaynayo iyo sababta uu u sameeyo.
Waan ka xumahay inaan diido casuumaadaada, laakiin ujeedo kama lihi inaan ka faalloodo barta halkaas oo, aan ku qiimeeyo sadarka saxda ah, kaliya adiga iyo isticmaale kale oo desdelinux ah (Waxaan u maleynayaa in la xanibay oo faallooyin badan oo "trolls" ah) laga dhiibanayo.
Waxaan kugu martiqaadayaa inaad faallooyinkaaga soo socda ku saleyso ilo lagu kalsoon yahay, adigoon tafatirin oo macno ahaan la fahmi karo (doorbidayo qaamuus gacmeed) oo aan ku jirin fikradaha ku saleysan fikirka.
Adoo raacaya talada "Ha quudin troll" Waxaan ku sagootinayaa qoraalkan, mar dambe ma geli doono si aan u akhriyo wixii faallooyin ah ama aan uga jawaabo.
@staff. Waxaad runtii jeceshahay inaad yareyso faallooyinka sida ugu habboon. Anigu ma qorin «Haddii aan ku siiyo laba-geesood oo aan marin u helin lambarka, taasi waa software-lahaansho». Waxaan qoray "Haddii aan ku siiyo laba-binar oo aan marin u helin koodhka, taasi waa lahaansho iyo softiweer software xiran illaa aan ka caddeeyo si kale." Waa inaad ogaataa farqiga.
Waad ku celcelinaysaa in taydu tahay ra’yi uun, sidaad u khaldan tahay (oo waxaan u maleynayaa inaad horeyba u garatay hadda). Dooddaadu waxay tahay in horumariyayaasha Webkit ay mashruucooda u aqoonsadaan inay yihiin software furan oo furan. Waxaan ku siinayaa tusaale si aad u aragto sida ay u fududahay kala furfurka taa. OpenSSH waa mashruuc shatiyeysan oo BSD ah oo soosaarayaasheeda ay ku soo qoreen boggooda internetka in ay tahay barnaamij bilaash ah. Marka loo eego sababayntaada, labada Webkit (BSD + GPL) ama OpenSSH (BSD) ayaa khaldan. Intaas waxaa sii dheer, hogaamiyaha mashruuca OpenSSH waxaa FSF gudoonsiiyay "Abaalmarinta Software Bilaashka ah ee 2004" qofkaasina wuxuu inta badan la shaqeeyaa barnaamijyada shatiga leh ee BSD. Haddii aysan ahayn rukhsadaha calaamadeeya qaybta "softiweer bilaash ah", waxaad ii sheegi doontaa macnaha ay leedahay in lagu kala saaro iyadoo loo eegayo fikradaha barnaamijyada.
Hada doodaada markii ay dhamaadeen, waxaan caadi u arkaa inaadan sii wadin dooda. Waa waxa ugu caqliga badan ee aad sameyn karto.
Wixii @ pandev92 iyo "demagoguery":
Aan ka dhigno aragtidan:
Barnaamij ahaan, BSD waxay koodhkayga ka dhigtaa mid bilaash ah (runti waa "furan yahay")
GPL sidoo kale waxay ubaahantahay in koodhkaygu xor ahaado iyo dhamaan nambarka qof kastaa iga abuuro. GPL wuxuu ka fikiraa bulshada. Waxa aan ku hoos qoro barnaamijka 'GPL' wuxuu ahaan doonaa weligiisna ku jiri doonaa barta dadweynaha.
Taasi waa sababta ay bilaash u tahay.
In qof uu ka faa'iideysan karo shaqadeyda aniga oo aan wax dib bulshada ugu soo celinaynin shati kama sii dhigeyso "bilaash". Taasi waa fikradda Xorriyadda ka timid abuureyaasha ereyga "Bilaash" ee lambarka.
Aan aragno haddii aan ogaanno ...
Waan ka xumahay inaan kaa hor imaado, laakiin BSD weli way ka xor badan tahay GPL-ka. "
WAQTI LA'AAN, ma aqaano sababaha fudud ee aad sameyso.
Waxaa jira khad badan oo ku qoran mowduuca xitaa halkan DL.
GPL waa ruqsad xaqiijineysa XORRIYADDA XEERKA MUSTAQBALKA SI AAD WELIGEED LOOGU SOO KORDHIYO LOO DIIDO.
BSD waa ruqsad nacas ah oo qurux badan tan iyo markii ay bixiso koodh bulshada laga sameeyay , oo bilaash ah, iyada oo aan la qaadin taxaddarrada lagu ilaalinayo maalgashiga bulshada.
IIRC BSD wuxuu ku dhashay gudaha Univ. Of Berkeley, California. Berkeley waxay go'aansatay inay siidayso AT&T Unix koodhka koodhka ee ardayda iyo qalinjabiyeyaashu ku horumarinayeen liisanka oo aan ku soo rogin nooc kasta oo xaddidaad ah, oo ay ku jiraan CANNIBALIZE lafteeda.
Waad ku mahadsan tahay hanka GPL, shirkadaha leh ilo ku filan oo ay ku sameyn karaan horumarin waaweyn oo ku saleysan liisankaan ayaa laga yaabaa inay soo laabtaan laga yaabo inay ka badan yihiin wixii ay markii hore ka soo qaateen bulshada taasna waxay u aheyd aasaas u ah koritaanka, taas oo u saamaxday horumarka baaxadda leh ee bulshada GPL. Software bilaash ah.
Way adag tahay in la sameeyo saadaalin sax ah oo ku saabsan suurtagalnimada masiirka laakiin waxaan u maleyn karnaa in xaalad la mid ah oo ku hoos jirta liisanka BSD shirkadahaani hubaal inay gacan ka gaysan lahaayeen oo keliya qayb yar oo ka mid ah wixii ay awoodaan inay ku darsadaan mahadnaqa GPL.
GPL wuxuu fiiriyaa mustaqbalka, BSD wuxuu eegaa xuddunta.
Qaabka aad u aragto xorriyadda waa khalad, rukhsad iga qaadeysa xorriyadayda si loo xiro koodhka, hadda wixii ka dambeeya gabi ahaanba xor ma ahan, xorriyadda waxay ka kooban tahay suurtagalnimada doorashada shar ama wanaag, haddii aan kaliya dooran karo wanaag, markaa maya Xor baan ahay, waxaan ahay diin, taas oo ka duwan. BSD waxay daryeelaysaa in koodhkiisu uu lacag la’aan yahay qof walbana uu u adeegsan karo wuxuu doono, sida uu rabo iyo goorta uu doono isagoon sharraxaad ka bixin oo aan loo baahnayn xayiraad falsafad ah. Haa haa, liisanka bsd wuu ka xor badan yahay GPL-ka.
Ruqsad u oggolaanaysa barnaamijka bilaashka ah inuu noqdo mid aan xor ahayn ma noqon karo "mid ka xor" kan kale.
Waxay la mid tahay u oggolaanshaha (ama "xoriyadda") inaad dadka kale ka qaaddo xorriyaddooda.
Goyntaada waxay u egtahay: "Dalkeyga waanu ka xoroown nahay kaaga, maxaa yeelay dadka degan oo dhami waxay leeyihiin 'xorriyad' inay ku kala baxaan ciddii aan doonno"
Si loo sii caddeeyo xitaa, waxaa habboon in la arko waxa abuuraya erayga "Software Bilaash ah"
Waad ku mahadsan tahay wanaag inaad si cad u sharaxday oo aad ilbaxnimo ku dheehantahay inaad u sharaxdo @pandev sida uu doqon u yahay, maxaa yeelay durba waxaan aad ugu mashquulsanaa aqrinta bucshirada noocaas ah
OGEYSIIS: Ma aqaano Morpheus, "nacaska" shayga ku wajahan pandev92 ayaa si gaar ah aniga iigu socda.
Wixii aan ka akhriyey wikipedia, qayb ka mid ah webkit-ka ayaa ruqsad haysta BSD, qaybta kalena GPL, markaa waa bilaash, salaan.
Wanaag iyo xumaan.
A biraawsar had iyo jeer hal-abuurnimo had iyo jeer abuuray tikniyoolajiyaddii ugu horreysay oo had iyo jeer laad ku tufo la guuriyo.
Tani wax kale ma aha ee waa qiimo dhimis
Dhinac waan ku faraxsanahay, laakiin waa inaan dib u eego koodhka shaxdayda ...
Ka waran bulshada.
Aragtida arrintan la xiriirta, kana timid Elav iyo akhristayaasha kaleba, lafteeda ayaa sax ah, laakiin waxa habboon in la falanqeeyo waa sababta iyo sababta. In kasta oo Shaqaalaha (oo aanan iiga harin qolka inaan ku jawaabo) ay leeyihiin sababteeda, xaqiiqda fudud ee isbeddelku waxba uma horseedo haddii aan ka aragno dhinaca aragtida guulaha iyo badbaadada, istiraatiijiyadda noocan ah waxay keenaysaa in la waayo. In kasta oo "aragti ahaan" dadaalkan aan gebi ahaanba lumin oo dib loo warshadeyn karo, 22-kii sano ee la soo dhaafay (tan iyo markii aan bilaabay xiisaha adduunkan LINUX) waxaan ku arkay shaqooyin aad u wanaagsan oo aad u wanaagsan oo la ilaaway runtiina runtii waa laga waayey khariidada.
La-taliye ahaan qaabkan, waxaan marwalba iskudayey inaan dhiirrigeliyo waxyaabo kale oo lacag la’aan ah, laakiin mararka qaarkood kala duwanaanshaha xad-dhaafka ahi wuxuu ka dhigan yahay inaysan lahayn awooddii lagama maarmaanka u ahayd inay xoojiso (tusaale ahaan, KDE, XFCE, Gnome, Gimp, Blender, LibreOffice, iwm. waxay ku gaareen si bilaash ah maaddaama ay leeyihiin qaybtooda faa'iidada leh) taas oo u baahan dhadhan xun iyo daqiiqado. Hadda, dunida IT-ga waxay la socotaa isbeddellada (sida adduunka moodada ah) iyo isbeddelka hadda jira waa in la keeno barnaamijyo (iOS ama qaabka Android) miiska si loo jaangooyo isweydaarsiga loona yareeyo qallooca waxbarashada.
Anigu shakhsi ahaan waan tixgeliyaa oo waxaan aaminsanahay in xad-dhaafka (sida caafimaadka) ay xun yihiin iyo in mustaqbalka fog qiime la bixiyo. Novell, Canonical, Red Hat, Mozilla Foundation, iwm ayaa tusaale fiican u ah in tartamiddu ay tahay mid heer sare ah oo caafimaad leh, laakiin haddii aan si qoto dheer u falanqeyno sababta ay guushoodu u tahay baaritaanka, hal-abuurka, laakiin had iyo jeer alaabta ugu dambeysa ee lagu bixiyo wax soo saar aad u deggan marka lagu daro aragti dheer.
Waxaan u maleynayaa in Opera-kan uu tuuray xadhigga qoortiisa. Waxa ugu fiican ayaa noqon lahaa in loo maro dariiqa Google: sii daayo Presto oo sii wad hogaaminta usha si isbadal loogu sameeyo Opera, kuwa kalena haloo sameeyo noocyo kale oo iyada ku saleysan.
Waxay noqon laheyd lagama maarmaan in la soo jeediyo inay sii daayaan Presto, waxay noqon laheyd wado lagu celiyo wixii ay ka qaadan lahaayeen FOSS
Waxay ila tahay talaabo aan guuleysan. Mashiinka Presto-ku wuu kufiican yahay, heer lamid ah WebKit. Iswaafaq la’aanta Opera waxaa qayb ahaan iska leh, kuwa horumariya, iyo Google lafteeda.
Bogagga kaliya ee aan is-qaadan karin ee Opera waa bogagga Google, sidee xiiso u leedahay, sax?
Ku jawaab Shengdi
Kaliya waa madax-madaxeed loogu talagalay Opera. Xaqiiqdii waxaan aaminsanahay in Opera oo tallaabadani hubaal dhimatay. Haddii ay jiraan wax xiiso leh oo ku saabsan mashruucan Opera oo dhan, wuxuu ahaa xasiloonida Noorwiijiga. Dhamaantood way soo guuriyeen Opera, Opera ayaa ikhtiraacay inta kalena si fudud ayey ugu guuriyeen si muuqata; laakiin waxaa soo baxday in Opera ay go’aansatay inay is disho, tani waa iga baxsan tahay.
Miyay u noqon doonaan lapdogs shirkadda Google? Hmmm… Rome ma bixiso khaa'imiinta.
Tacsi ayaan u dirayaa Opera.
Ku jawaab Rube
Miiska isbarbardhiga ee u dhexeeya LibreOffice 4.0 iyo MS Office 2013